Khabar Kantipur » काेराेनाले १० सुरक्षाकर्मीकाे ज्यान लियो, नेपाल प्रहरी धेरै प्रभावित….!
काेराेनाले १० सुरक्षाकर्मीकाे ज्यान लियो, नेपाल प्रहरी धेरै प्रभावित….!
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी बसन्त कुँवरले भने, ‘कोभिड– १९ को महामारी सुरु भएलगत्तै अग्रपंक्तिमा खटिएर नेपाल प्रहरीले काम ग¥यो । यस क्रममा धेरै संक्रमित भए । जसमध्ये ६ जना सहयोद्धा गुमाउनुपर्‍यो । नेपाल प्रहरीका लागि यो ठूलो क्षति हो ।’त्यसैबीच, महामारी सुरु भएयता तीनवटै सुरक्षा निकायका १३ हजार चार सय ८२ सुरक्षाकर्मी संक्रमित भएका थिए ।
जसमध्ये १३ हजार दुई सय ७५ निको भएर घर फर्किसकेका छन् । बाँकी एक सय ९५ जना क्वारेन्टिनमा बसेर उपचार गराइरहेका छन् । संक्रमित हुने संख्या पनि नेपाल प्रहरीकै सुरक्षाकर्मीको धेरै छ । यस अवधिमा नेपाल प्रहरीका मात्रै सात हजार चार सय ६२ सुरक्षाकर्मी संक्रमित बनेका छन् । जसमध्ये सात हजार तीन सय ६ निको भएर घर फर्किए ।
संक्रमित हुनेमा त्यसपछि नेपाली सेनाका सुरक्षाकर्मी धेरै छन् । तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा सेनाका पाँच हजार दुई १७ सुरक्षाकर्मी संक्रमित बने ।
जसमध्ये पाँच हजार एक सय ७४ निको भएर काममा फर्किसकेका छन् । सशस्त्र प्रहरीका भने यस अवधिमा आठ सय तीन सुरक्षाकर्मी संक्रमित बने । जसमध्ये सात सय ९५ निको भएर नियमित काममा फर्किसकेका छन् । तीनवटै सुरक्षा निकायका अझै एक सय २४ सुरक्षाकर्मीमा कोरोनाको संक्रमण छ ।
जो अहिले अस्प्तालमा उपचाररत छन् । उपचाररतमध्ये नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्मी ७९, सेनाका ४१ र सशस्त्रका चारजनाले क्वारेन्टिनमा उपचार गराइरहेका छन् ।
सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी पौडेलले भने, ‘नेपाली सेनाका पाँच हजार सुरक्षाकर्मी कोरोनाबाट संक्रमित बने । अधिकांश निको भएर नियमित ड्युटीमा फर्किएका छन् । ४१ जनाकोे उपचार भइरहको छ ।